ဆေကိန္ဒ၊ အရှင် (ဓမ္မဒူတ) - ဝီကီပီးဒီးယား
ဆေကိန္ဒ၊ အရှင် (ဓမ္မဒူတ)
မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာ ဒီပလိုမာဘွဲ့၊ အစိုးရသာသနဓဇဓမ္မာစရိယ၊ Ph.D (Buddhist Studies) from ITBM
ဓမ္မဒူတ ဒေါက်တာ ဆေကိန္ဒ
(၁၉၅၈-၀၁-၂၈) ၂၈ ဇန်နဝါရီ၊ ၁၉၅၈ (အသက် ၆၂)
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ စစ်ကိုင်းမြို့၊ သောတာပန်ရပ်ကွက်။
အရှင်ဆေကိန္ဒ သည် မြန်မာနိုင်ငံသား ဗုဒ္ဓဘာသာ ရဟန်းတော်တစ်ပါးဖြစ်သည်။ ဓမ္မဒူတ အရှင်ဆေကိန္ဒ ဟူ၍လည်းသိရှိကြ၏ ။
၁.၁ ငယ်စဉ်ဘဝနှင့် ပညာရေး
အရှင်ဆေကိန္ဒ အလောင်းအလျာကို စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ စစ်ကိုင်းမြို့၊ သောတာပန်ရပ်ကွက်၊ ခမည်းတော် ဦးအောင်သန်းနှင့် မယ်တော် ဒေါ်စိန်ကြည်တို့က ကောဇာသက္ကရာဇ် ၁၃၁၉-ခုနှစ်၊ တပို့တွဲလဆန်း(၉)ရက်၊ (28-1-1958) အင်္ဂါနေ့၌ ဖွားမြင်သည်။
၁၉၇၅ ၌ စစ်ကိုင်းမြို့ အမှတ်(၁) အထက်တန်းကျောင်းမှ ၁၀ တန်း အောင်မြင်ခဲ့ပြီး ၁၉၇၉ ၌ မန္တလေးမြို့ စက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ၏ မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာ ဒီပလိုမာဘွဲ့(A.G.T.I. (civil)) ကို ရရှိအောင်မြင်သည်။ ၁၉၈၃၌ မွန်ပြည်နယ် ဘီးလင်းမြို့နယ် တောင်စွန်းဓမ္မဒူတတောရ ဆရာတော်ကြီးကို ဥပဇ္ဈာယ်ပြု၍ ရှင်ရဟန်းအဖြစ်ကို ခံယူခဲ့သည်။ တောင်စွန်း ဓမ္မဒူတတောရကျောင်းတိုက်တွင် ပရိယတ္တိစာပေများကို လေ့လာ၍ မူလတန်း၊ ပထမငယ်တန်း၊ ပထမလတ်တန်း၊ ပထမကြီးတန်းတို့ကို နှစ်ချင်းပေါက် အောင်မြင်ခဲ့သည်။ ၁၉၉၃တွင် စာချတန်း၌ ကျမ်းရင်းသုံးကျမ်းစလုံးကို တစ်နှစ်တည်းဖြင့်ပင် အောင်မြင်ခဲ့၍ အစိုးရသာသနဓဇဓမ္မာစရိယဘွဲ့တံဆိပ်ကို ရရှိတော်မူခဲ့သည်။ သဒ္ဓမ္မနေပုညဓမ္မာစရိယဘွဲ့နှင့် သာသနဇောတိပါလဓမ္မာစရိယဘွဲ့တို့ကိုလည်း ရရှိခဲ့၏ ။
ပရိယတ္တိစာပေများကို တောင်စွန်း ဓမ္မဒူတတောရ၊ အမရပူရမြို့ မဟာဂန္ဓာရုံကျောင်းတိုက်၊ မန္တလေးမြို့ မစိုးရိမ်တိုက်၊ စစ်ကိုင်းမြို့ ဇေယျသိန် ပါဠိတက္ကသိုလ်၊ စစ်ကိုင်းမြို့ သုဗောဓာရုံ စာသင်တိုက် စသော ကျောင်းတိုက်တို့ရှိ ဆရာတော်များထံမှ နည်းနာခံယူ သင်ယူခဲ့သည်။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ထေရဝါဒ ဗုဒ္ဓသာသနာပြုတက္ကသိုလ်တွင် ပညာဆက်လက်ဆည်းပူး၍ ထိုတက္ကသိုလ်မှ M.A. (Buddhism) နှင့် Ph.D. ဘွဲ့တို့ကို ရရှိခဲ့၏ ။
နိုင်ငံတော်မှ မဟာသဒ္ဓမ္မဇောတိကဓဇ၊ မဟာဂန္ထဝါစကပဏ္ဍိတ၊ ဓမ္မကထိက ဗဟုဇနဟိတဓရ ဘွဲ့များကို ဆရာတော်အား ဆပ်ကပ်လှူဒါန်းခဲ့သည်။
ပါမောက္ခ ဒေါက်တာ အရှင်ဆေကိန္ဒသည် ဓမ္မဒူတ နာယက အဖွဲ့ဝင်၊ မှော်ဘီမြို့နယ် သံဃနာယက အဖွဲ့ဝင်၊ ဓမ္မဒူတ ဇေတဝန်တောရ ဆေကိန္ဒာရာမကျောင်းတိုက်ကြီး၏ ပဓာန နာယကဆရာတော်၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ထေရဝါဒ ဗုဒ္ဓသာသနာပြု တက္ကသိုလ် ပဋိပတ္တိမဟာဌာန (ဝိပဿနာ) ပါမောက္ခ ၊တွဲဖက် ပါမောက္ခ၊ အဆောင်မှူးဆရာတော် စသော တာဝန်တို့နှင့် ကျမ်းစာရေးသားခြင်း၊ စာပေပို့ချခြင်း၊ တရားဟောပြောခြင်း၊ တရားပြသခြင်း၊ ယဉ်ကျေးလိမ္မာ လူငယ်သင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်ခြင်း စသည်တို့ကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။
↑ ဓမ္မဒူတဆေကိန္ဒတက္ကသိုလ် တည်ထောင်သူဆရာတော် ဓမ္မဒူတ ဒေါက်တာ အရှင်ဆေကိန္ဒ
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဆေကိန္ဒ၊_အရှင်_(ဓမ္မဒူတ)&oldid=516277" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၀ မေ ၂၀၂၀၊ ၁၇:၄၂ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။